Hay’ada Kaalo oo tababar u qabatay shaqaalaha ka shaqeeya arimaha tacadiyada ee Magaalada Boosaaso. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hay’ada Kaalo oo tababar u qabatay shaqaalaha ka shaqeeya arimaha tacadiyada ee Magaalada Boosaaso.
Hay’ada Kaalo oo tababar u qabatay shaqaalaha ka shaqeeya arimaha tacadiyada ee Magaalada Boosaaso.
March 18, 2019 - By: Mohamud Nadif
Hay’ada Kaalo ayaa Magaalada Boosaaso ku qabatay tababar 2 maalin ah, waxaana ka faaidaysan doona shaqaalaha hay’ada kaalo, Wasaarada haweenka puntland iyo hay’aydaha ka shaqeeyaha difaaca (Protections), Ujeedada tababarkaan ayaa hayd in kor loo qaado Aqoonta iyo xirfada shaqaalaha ee ku saabsan sida looga hortago tacadiyada SGBV, la talinta dadka iyo maamulida kiisaska (case Managments)
Cabdi Casiis Siciid wakiilka kaalo ee Gobolka Bari oo ugu horayn goobta ka hadlay ayaa sheegay in tababarkaan uu muhiim u yahay shaqaalaha maadama lagu tababarayo wax ku saabsan shaqadooda malinlaha ah.
Shamis mahad oo ka socota wasaarada haweenka iyo arimaha qoyska puntland ayaa si rasmiya u daahfurtay waxayna ka hadashay Mumiimada uu leyahay Tababarkaan, waxayna bogaadisay cidii ka qaybqaatay fududaynta iyo hirgelinta tababarkaan.
Hay’ada Kaalo iyo bah wadaagteeda ayaa inta badan ka shaqeeya Arimaha la xiriira Qaxootiga iyo barakacayaasha.